SoShwe – Page 5
Pocari Sweat ချစ်သူတွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်လေး ထပ်မံရောက်ရှိလို့လာပါပြီ . . . 900mL ဘူးကြီးလေးဘ…
တန်ဟက်ဂျ်က ယူနိုက်တက်မှာ ၃ ယောက်တန်းတိုက်စစ်ကို ပုံဖော်ချင်နေတယ်လို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းစာက ဖော်ပ…
တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiang ဒေသမှ အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ “Blind Date” လို့ခေါ်တဲ့ တစ…
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြစမြဲပါ။ အချို့သောအားနည်းချက်တွေက ပေါ်လွင်ထင်ရှားတာမျိုး မ…
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အနာခ…
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ငယ်ဘဝအသင်းဖြစ်တဲ့ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းဒါရိုက်တာ ဟူဂိုဗီယာနာက ရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သ…
Samsung ချစ်သူတွေအတွက် အတန်ဆုံး၊ အမိုက်ဆုံး၊ အကြမ်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးမယ့် “Samsung …
လစာထုတ်ပြီးမှ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ Samsung ချစ်သူတို့အတွက် လစာလဲရ . . . Promotion လဲရ . . . ဒါတွေအပြင် …
YouTube ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်လွှား လူသုံးအများဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအရင်းအမြစ်ကြီးတစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ …
၁။ ထမင်းဝိုင်း။ ကောင်းမွန်သည့် ထမင်းဝိုင်း၌ အစားအသောက်၊ သောက်ရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် စည်း…
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကို သတိပေးပြောကြားလိုက်တဲ့ Elon Musk
အီလွန်မတ်စ်အပါအဝင် ထိပ်တန်းဘောဂဗေဒပညာရှင် နိုရီယယ် ရော်ဘီနီနဲ့ Goldman Sachs Group တို့ကလည်း အမေရိကန်စီးပွားရေး အကျဘက်ကို ရောက်ရှိဖို့ အလားအလာ မြင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီး သတိပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ …
“လုံခြုံကြွယ်ဝတဲ့ အနာဂတ်ဆီသို့ အာမခံအသိပညာ မျှဝေစို့”
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ Bitcoin တွေ ဝယ်ယူပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သမ္မတ။
ဝန်ထမ်း ၁၁၀၀ ကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတခု။
နည်းပညာအခြေစိုက် Mobile Application တစ်ခုကြောင့်် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သုံးပုံတစ်ပုံအထိ မြင့်တက်လာတဲ့ ဟောင်ကောင်သူဌေးကြီး Li Ka-shing
Video Interview လုပ်တဲ့အခါမှာသိရှိထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ။
ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်လျှောက်ပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါ အပြင်မှာပဲ လူချင်းတွေ့ပြီး အင်တာဗျူးလေ့ရှိပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြောင်းလဲလာသည့် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံအရ Work From Home လုပ်ရခြင်း၊ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါ၊ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာ …
လူမည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ပညာသင်စရိတ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီး။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပညာသင်ကြားရာ၌ သိထားသင့်သည့်အချက်များ။
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အနာခံမှအသာစံရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ မြူးကြွတဲ့သီချင်းကို နားထောင်ရင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုတက်ကြွစေပြီး အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းတောင် မသိတော့တဲ့အထိ …
လကမ္ဘာပေါ်မှ 4G ကွန်ယက်အကြောင်း။
ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုအသုံးပြုကာ ကွန်ကရစ်ထက် ပိုမိုခိုင်မာတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များ။
Liverpool မှာ မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် Noah Whitehead ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူနဲ့သက်တူအရွယ်တူ ကလေးငယ်အချို့က ချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့မိသားစုမှာ မွေးဖွားလာပြီး အဟာရရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေကို နေစဉ်စားသောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကို သိရှိပြီးနောက်ပိုင်း ဆင်းရဲတဲ့ကလေးငယ်တွေကို သူတတ်နိုင်သလောက် အစားအသောက်ပေးကမ်းနိုင်ဖို့ အလှူငွေတွေ ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Noah က “လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အချို့က ကလေးငယ်တချို့ဟာ အဟာရရှိတဲ့ အစားအသောက်ကို မစားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အထောက်အပ့ံမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်း သတင်းမှာ ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားရတာဟာ တကယ်ကို ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Liverpool မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့သူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို စုထားတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးတွေ လှူဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် …
အိမ်အသစ်ရှာဖွေနေသူ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ပြောင်းနေဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရှုပေးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ အခုခေတ်မှာတော့ လူမှုကွန်ရက်ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာကြပြီမို့ အိမ်အသစ်ရှာနေသူတွေကလည်း လူမှုကွန်ရက်ကနေပဲ ကိုယ်နေလိုတဲ့အိမ်လေးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း လူမှုကွန်ရက်ကနေ အိမ်အသစ်ရှာဖွေရာကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး ၃ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေနိုင်တယ်။ အိမ်အသစ်ပြောင်းဖို့ စီစဉ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်မယ့် အိမ်အသစ်ကို နေပူထဲသွားစရာမလို ၊ လမ်းတွေအများကြီးလျှောက်စရာမလိုပဲ ကွန်ပြူတာလေးရှိရုံနဲ့ Online Property Website တွေမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။ ၂။ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အကြောင်းကိုလည်း လေ့လာပါ။ အိမ်မှာနေရင်း ကွန်ပြူတာကိုအသုံးပြုပြီး အိမ်အသစ်ရှာဖွေနေရင်းနဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အကြောင်းကိုလည်း လေ့လာထားပါ။ ဒီလိုမျိုးလေ့လာထားခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ …
အိပ်ရင်းနဲ့ဟောက်တတ်သူတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ဘေးမှာအိပ်တဲ့သူတွေက အိပ်ရေးပျက်ရတယ်ဆိုပေမယ့် အိပ်နေရင်းနဲ့ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင် အသက်အန္တရာယ်ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိပ်နေရင်းနဲ့ဟောက်ရာကနေ အသက်ရှူရပ်တန့်သွားတာမျိုး ဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့်ပါ။ အိပ်နေရင်းနဲ့ဘာကြောင့် ဟောက်သလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေအများကြီးရှိပါတယ်။ ရောဂါအခံရှိတာကြောင့် ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဝနေတာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားနေရတာကြောင့် စတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတစ်ကြိမ်သာသောက်ရတဲ့ အိပ်နေရင်းနဲ့ ဟောက်တတ်တာကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးဝါးတစ်မျိုးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးဝါးအသစ်ရဲ့ ကုဒ်နာမည်ကတော့ “AD109” ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက “Apnimed” လို့ အမည်ပေးခဲ့ကာ အိပ်နေရင်းနဲ့ဟောက်ခြင်းကို ၇၄% အထိလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ Daily Mail သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်အရ အဆိုပါဆေးဝါးထဲမှာ ဟောက်တာကို …
Page5of 996« First...34567»102030...Last »